Shabakadda Wararka ee 'Hindi iyo Dhaqanka' - THE INDIAN FACE
Sawir qaadista ficilka Samo Vidic Runtii waa mid awood badan, firfircoon oo hal abuur leh, laakiin sidoo kale u dabaaldegta nolosha iyo sheekooyinka dhiirrigelinta ugu dhiirrigelinta badan.Waxaan tixraacnaa imtixaannada! Akhriso oo soo hel shaqada sawirada cajiibka ah ee Samo vidic, sawir qaade.
Kasbashada waligeed nama baxsato hadaan nahay waqtiga saxda ah iyo goobta. Kani waa sawir qaadashada ficil ee Lucas Gilman! Guji oo soo hel sawirradiisa ugu fiican iyo farsamooyinka sawir qaadista.
Sawirradayda ayaa soo jiidanaya dareenka (ugu yaraan taasi waa waxa ay dhahaan) marka loo eego isbarbar dhigga weyn, isticmaalka biligleyda iyo waxyaabaha la soo saaray ee aadka loo bartay. Iyagu waa cunsur muhiim ah oo aan jeclahay inaan la shaqeeyo, taasna aniga fikradeyda ayaa isbeddel sameyn kara.
Michael Clark: Farsamada iyo sawir qaadista fanka
Michael Clark wuxuu ku takhasusay isboortiga ciyaaraha, muuqaalka duurjoogta iyo safarka, isagoo adeegsanaya farsamooyin muuqaal iyo teknolojiyad muhiim ah si loo gaaro sawir habboon. Awooddiisa ayaa u horseeday in si caalami ah loogu daabaco shakhsiyaadka, daabacayaasha, ujeeddooyinka xayeysiinta, iyo kuwa kale.
Chechu Arribas iyo aragtidiisa ku saabsan Barafka
Waxaan ku noolahay magaalo ku taal Pyrenees halkaasoo jiilaal walba aan u dulqaado si aan barafka uga soo baxo si aan ugu raaxeysto oo uga shaqeeyo; Waxaan u beddelayaa shaqadeyda ah Lifeguard Pistero oo ku taal madadaalada isteerinka iyo sawir qaade aad u ba'an.
Waxaan dhihi karaa anigoo aan ka baqayn in aan khalad ahay in inta lagu jiro xilliga qaboobaha aan qabanayo nashaadaad qaboobaha maalin kasta taasina waxay ii oggolaaneysaa inaan ka shaqeeyo ku dhowaad dhammaan anshaxyada lagu soo daro ciyaaraha qaboobaha.
Adrián Otero: skater-ga Galistiga ee dhismay safka hore ee dhagaxa
Adrián Otero: skater-ka Galician ee dhisi lahaa sagxad dhagax hore Adrián Otero waa nin reer Galbeedka ah dhalasho ahaan iyo istaraatijiyad iyo aqoonyahan ku xeel dheer farshaxanimada. Maaddaama uu sidoo kale yahay skater, wuxuu leeyahay wax walba oo uu ku noqdo hormuud.